မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုဖို စဉ်းစားနေတာလား?? ဖုန်းပြင်သင်တန်းဘယ်မှာတက်ရမလဲလို့ တွေးနေတာလား ?? - Min Oaker
Unlabelled မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုဖို စဉ်းစားနေတာလား?? ဖုန်းပြင်သင်တန်းဘယ်မှာတက်ရမလဲလို့ တွေးနေတာလား ??
by Min Oaker on 9:56 PM
By Min Oaker at 9:56 PM